हिजो दिनभर : सभामुखमा सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित, प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम सर्वसम्मत !
प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा सभामुखका लागि एकमात्र प्रस्ताव परेकाले सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा सभाको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले गरेका हुन् ।
त्यसअघि सापकोटालाई सभामुखमा प्रस्ताव गर्दै पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेवाङले उनी सभामुखका लागि योग्य रहेको बताए ।
नेम्वाङको प्रस्तावलाई पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगर, नेकपा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले समर्थन गरे ।
सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि असोज १४ गतेयता प्रतिनिधि सभा सभामुखविहीन थियो ।
एकै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुन संवैधानिक अड्चन देखिएपछि उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि गत साता राजीनामा दिएकी थिइन् ।
सभामुख र उपसभामुख दुवैको राजीनामापछि जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले बैठकको अध्यक्षता गरेका हुन् ।
सभामुख निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब केही दिनमा उपसभामुख चयनको प्रक्रिया शुरू हुने संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ १४ गते मंगलवार बस्नेछ ।
उत्तरमा धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर, दक्षिणमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा पूर्व र पश्चिमतर्फ मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रसम्म राजधानीको सिमाना तोक्ने सहमति जुटेको छ,’ सभामुख यादवले भने, ‘समितिमा सर्वसम्मतिले उक्त प्रस्ताव पारित गर्न सफल भएका छौं ।’